737 Classic multipack olana olana
fanontaniana 737 Classic multipack olana olana
1 taona 3 volana lasa izay - 1 taona 3 volana lasa izay #826 by deckerb
Tiavo ity karazana ity, indrindra fa ny feo mampihetsi-po, ny fanamafisam-peo amin'ny fampakaram-bady sy ny hafa.
Toa misy adihevitra miaraka aminy tampoka manomboka eo amin'ny toerana misy azy eo amin'ny fiakarana. Ankoatra izany, ny fanonganam-panjakana dia mihamahazo vahana mba hampitombo haingana, na tsy misy fiatoana. Manana fotoana sarotra ho an'ny 140 amin'ny fanonganam-panjakana. Raha tsaraina amin'ny sasantsasany amin'ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny pejin-drakitra, tsy izaho irery no miaraka amin'ity olana ity.
Ny fampahalalana rehetra momba ny famahana orana dia tokony hankasitrahana.
Last edit: 1 taona 3 volana lasa izay deckerb. Antony: Teny tsy misy dikany
Voasakana ny mpampiasa
1 taona 3 volana lasa izay #827 by xHobbit420x
Google ary alaina ny fonosan-tsakafo 164 ho an'ny 737.
voavaha ny olana
1 taona 2 volana lasa izay #828 by deckerb
Misaotra fa tsy tena. Ny 737 default dia tsy manana fanatsarana lehibe izay ataon'ity pack.
1 taona 2 volana lasa izay #829 by bencas
Niezaka ny nametraka ny tabilao trim-pandaharana dia napetraka tamin'ny 1.7-1.8 degrees izay tokony hanamboatra ny tampon'ny tampoka.
1 taona 1 herinandro lasa izay - 1 taona 1 herinandro lasa izay #939 by DRCW
Ity no fanindroany novakiako momba io olana io, toa ny hoe tsy olana ho an'ny 737-800 no olana amin'ny taranaka zokiny amin'ity modely ity. Tena mora ny mametraka azy ... Mandehana any amin'ny CFG daka ho an'ny fiaramanidina, ary midina miverina mankany amin'ny sehatra [Engine] mitady ny tsipika Static_Thrust = Manova ny fanombohana ny tolotra ho an'ny 4000 Ohatra Raha mamaky azy io Static_Thrust = 22980 Ampio 4000 pounds ny vidiny mba hamaky izany Static_Thrust = 26980 ary vonjeo. Heveriko fa hahita asa tsara ianao.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: isidel
1 taona 1 herinandro lasa izay #948 by misshu
Aiza ao amin'ny rakitra ny CFG? Miezaka mitady izany aho ary toa tsy mahita azy io aho
1 taona 1 herinandro lasa izay - 1 taona 1 herinandro lasa izay #949 by DRCW
Miarahaba, Tsindrio ny bokotra eo amin'ny fikandranao ianao na manomboka eo amin'ny ilany havia eo amin'ny ilanao, alefaso amin'ny ordinatera, fafao C / programa x86, microsoft, tokony misy ny rakitra FSX, Manokatra izany ary misy lisitra lava ... mifidy SimObjects, dia mifidiana fiaramanidina .... Ity ny toerana fitehirizana ny fiaramanidina ho an'ny FSX ... jereo ny fiaramanidina izay tadiavinao amin'ny lisitra .. afeno ny rakitra ary ao anatin'io lisitra io dia fiaramanidina cfg Ity ny tahiry CFG. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao dia avelao aho hahafantatra. Tsara raha fantatrao hoe inona ny varavarankely misy anao. Satria mbola tsy nanokatra ny rakitra cfg ianao alohan'ny hikirakana azy io ary mifidiana misokatra "kahie [/ loko]"
Ity misy ohatra iray amin'ny fizarana izay ho hitanao:
Nesoriko ity avy amin'ny CRJ-700
1 taona 5 andro lasa izay #964 by superskullmaster
Manana fanamafisam-peo fampisehoana aho izay manao izany ho anao rehetra. Raha vantany vao nahita fomba iray hampiakarana azy aho dia hanao.